Rivaldo oo uga digay Real Madrid inay soo ceshato Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Madrid) 19 Maarso 2021. Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaa xaqiijiyay inay jirto khatar weyn oo ku saabsan dib ugu soo celinta Cristiano Ronaldo ee kooxda Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga ee soo aadan.
Cristiano Ronaldo ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Juventus kaddib markii laga reebay tartanka UEFA Champions League, waxayna Ilo wareedyo badan sheegeen in Jorge Mendes oo ah wakiilka ciyaaryahanka uu doonayo in markale uu ku celiyo kooxda Real Madrid.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ku soo laabashada Cristiano Ronaldo ee kooxda Real Madrid? Taani waxay ka dhigeysaa Los Blancos kuwo aad u faraxsan , laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa khatar.”
“Waa inaan ogaano in Ronaldo, oo ka tagay Real Madrid dhowr sano ka hor, uusan la mid aheyn kan jooga Juventus, dabcan wuxuu sii wadi doonaa inuu dhaliyo goolal badan.”
“Laakiin wuxuu qaadi doonaa mas’uuliyad weyn oo marxaladan xirfadiisa ah, haddii aysan xaallada si wanaagsan u socon, tani waxay halis galineysaa heerkiisa halyeeynimo ee kooxda.”
Muxuu Klopp ka yiri kulanka Liverpool iyo Real Madrid ee tartanka UEFA Champions League?
Horudhac: Celta Vigo vs Real Madrid… (Los Blancos oo doonaysa inay gaarto saddex guul oo xiriir ah tartammada oo dhan)